Ikike nke ndị nduzi | Law & More B.V. | Eindhoven na Amsterdam
blog » Ikike nke ndị nduzi na Netherlands
Ikike nke ndị nduzi na Netherlands
Ibido ụlọ ọrụ nke gị bụ ọrụ mara mma maka ọtụtụ mmadụ ma nwee ọtụtụ abamuru. Agbanyeghị, ihe (ndị ga-eme n'ọdịnihu) ndị ọchụnta ego yiri ka ha anaghị eleda anya, bụ eziokwu ahụ bụ na ịchọta ụlọ ọrụ na-abịa ọghọm ya na ihe egwu. Mgbe etolitela ụlọ ọrụ n'ụdị nke iwu kwadoro, enwere ihe ọghọm nke ibu ndị ntụzi nọ.
Legallọ iwu kwadoro bụ ụlọ ọrụ dị iche iche nwere njiri mara iwu. Yabụ, ụlọ ọrụ nwere ike ịme ihe gbasara iwu. Iji mezuo nke a, ngalaba iwu chọrọ enyemaka. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ iwu kwadoro dị n'akwụkwọ, ọ nweghị ike ịrụ ọrụ n'onwe ya. Ndi mmadu nwere ikike ịnọchite anya ya onye iwu kwadoro. Na ntanetị, ndị isi ụlọ ọrụ na-anọchi anya ụlọ ọrụ iwu. Ndị ntụzịaka nwere ike rụọ ọrụ gbasara iwu gbasara ndị ọka iwu. Onye nduzi na-ejikọ ụlọ ọrụ iwu kwadoro yana ọrụ ndị a. Na iwu, onye isi anaghị akwụ ụgwọ iji ụgwọ ụlọ ọrụ kwadoro ya na akụ nke onwe ya. Agbanyeghị, n'ọnọdụ ụfọdụ ibu ọrụ nke ndị nduzi nwere ike ịdapụta, n'ọnọdụ nke onye nduzi ahụ ga-eji aka ya mee ihe. E nwere ibu oru nke uzo oru abuo: nke ime na nke mpụga. Isiokwu a tụlere ụzọ dị iche iche maka ụgwọ nke ndị isi.
Mkpuchi mmezi nke ndị isi
Ibu oru nke ime putara na onye oru nke aka ya ga-anagide ya. Mkpuchi nke ime na-esite na ederede 2: 9 Dutch Civil Code. Enwere ike ijide onye na-eduzi onye nduzi mgbe ọ rụzuru ọrụ ya n'ụzọ adịghị mma. Enweghi mmezu nke ihe aga-eme n’enye n’uche mgbe enwere ike igba onye isi oru ebubo. Nke a dabere na ederede 2: 9 Dutch Civil Code. Ọzọkwa, onye nduzi ahụ enweghị ike leghaara anya na ịme ihe iji gbochie ihe omume na-adịghị mma. Kedu mgbe anyị na-ekwu maka ebubo siri ike? Dika usoro ikpe, a kwesiri inyocha ihe a site na iburu n'uche ọnọdụ niile n'okwu a. 
Emebi iwu megidere ihe ndị mejupụtara nke ụlọ ọrụ nwere nkewa dị ka ọnọdụ siri ike. Ọ bụrụ na ọ bụ nke a, iwu ga-eburu ndị nduzi. Agbanyeghị, onye ntụzi-ewetara ewetara eziokwu na ọnọdụ na-egosi na ime ihe megidere ngbako nke mgbakwunye adịghị ewetara ebubo oke. Ọ bụrụ na ikpe dị otu a, onye ọka ikpe kwesịrị ịgụnye nke ọma na ikpe ya. 
Ọtụtụ ibu n'ime ime na ume
Ikike dị na ederede 2: 9 Dutch Civil Code gụnyere na n'ụkpụrụ niile ndị nduzi na-akwụ ụgwọ ọtụtụ ugboro. Ya mere, a ga - ebo ebubo siri ike na ngalaba ndị isi. Agbanyeghị, enwere ihe dị iche n'iwu a. Onye isi nwere ike wepu onwe ya site na ibu ndi nduzi. Iji mee nke a, onye nduzi ahụ kwesịrị igosipụta na ebubo enweghị ike ịmegide ya ma ọ bụ na ọ leghaara ịme ihe iji gbochie nchịkwa na-adịghị mma. Nke a sitere na edemede 2: 9 Dutch Civil Code. Agaghị anabata mkpesa maka ihe omume. Onye nduzi ahụ gha gosipụtara na o weere usoro niile n'ike ya iji gbochie nchịkwa na-adịghị mma. Ibu ihe akaebe di n'aka onye isi ya.
Nkesa nke ihe aga-eme n’ime otu ndi isi nduzi puru ibu ihe di nkpa iji choputa ma obu onye nduzi puru ime ya. Agbanyeghị, a na-ewere ụfọdụ ọrụ dị ka ọrụ metụtara ndị isi oche niile. Ndị nduzi kwesịrị ịma ụfọdụ eziokwu na ọnọdụ. Nkesa nke ihe aga-agbanwe agbanweghi nke a. Na ụkpụrụ, enweghị ike abụghị ihe ndabere maka ịb ụ. Enwere ike ịtụ anya ka ndị nduzi mara nke ọma ma jụọ ajụjụ. Agbanyeghị, ọnọdụ nwere ike ime nke a na-agaghị atụ anya nke a n'aka onye isi.  Yabụ, ma onye ntụzi ọrụ nwere ike igosipụta onwe ya nke ọma ma ọ bụ na ọ dabere, dabere na eziokwu na ọnọdụ nke ikpe ahụ.
Oke nke ndi ndu
Mgbapu nke mpụga gụnyere na onye nduzi ga-akwụ ụgwọ maka ndị nke atọ. Mgbapu nke mpụga na-emebi vetiel nke ụlọ ọrụ. Thelọ ọrụ iwu akwadoghị ndị mmadụ sitere n'okike bụ ndị nduzi. Ebumnuche iwu maka njikwa ndị na-ahụ maka ihe ndị dị na mpụga bụ njikwa na-adịghị mma, dabere na isiokwu 2: 138 Dutch Civil Code na edemede 2: 248 Dutch Civil Code (n'ime odida ego) yana omume mmekpa ahụ dabere na ederede 6: 162 Dutch Civil Code (na mpụga ụlọ akụ. ).
Oke nke mgborogwu nke ndi isi n’ime odida
Ntinye aka nke ndị isi na-ahụ maka nchekwa na mmezi ego metụtara ụlọ ọrụ nwere obere ọrụ (Dutch BV na NV). Nke a sitere na edemede 2: 138 Dutch Civil Code na edemede 2: 248 Dutch Civil Code. Enwere ike ijide ndị nduzi mgbe ịkwụ ụgwọ site na njikwa ma ọ bụ mmejọ nke ndị isi oche. Curator ahụ, onye na-anọchite anya ndị niile kwụrụ ụgwọ ụgwọ, ga-enyocha ma ụgwọ nke ndị nduzi nwere ike itinye.
Enwere ike ịnabata ụgwọ mpụga n'ime mmefu ụlọ ọrụ mgbe ndị isi ụlọ ọrụ rụzuru ọrụ ya nke ọma yana mmezu na-ekwesịghị ekwesị bụ ihe dị mkpa na-akpata odida ahụ. Ibu ihe akaebe banyere mmezu a na-ezighi ezi nke ọrụ dị na curator; Ọ ghaghi ime ka o doo anya na onye ndu echiche ziri ezi, n'otu ọnọdụ ahụ agaghị eme otu a.  Omume na-emebi ndị o ji ụgwọ inwetara ụkpụrụ na-ebute njikwa na-adịghị mma. A ga-egbochi mmechi nke ndị isi.
Onye omebe iwu etinyela echiche ụfọdụ nke ihe akaebe na ederede 2: 138 sub 2 Dutch Civil Code na edemede 2: 248 sub 2 Dutch Civil Code. Mgbe oche nke ndị isi anaghị agbaso ederede 2:10 Dutch Civil Code ma ọ bụ ederede 2: 394 Dutch Civil Code, echiche nke ihe akaebe bilitere. N'okwu a, a na-eche na njikwa na-ekwesịghị ekwesị abụwo ihe dị mkpa kpatara nkwụnye ego ahụ. Nke a na-enyefe onye na-ahụ maka ibu ihe akaebe. Agbanyeghị, ndị isi nwere ike izipu echiche nke ihe akaebe. Iji mee nke a, onye nduzi ahụ ga-eme ka a mata na ọ bụghị egoghị nchịkwa ahụ kpatara ya, kama ọ bụ eziokwu na ọnọdụ ndị ọzọ. Onye isi ahụ ga-egosikwa na ya elegharala ụzọ iji gbochie nchịkwa na-adịghị mma anya.  Ọzọkwa, curator nwere ike itinye akwụkwọ maka oge afọ atọ tupu ụlọ akụ ahụ. Nke a sitere na edemede 2: 138 sub 6 Dutch Civil Code na edemede 2: 248 sub 6 Dutch Civil Code.
Ọtụtụ ibu mpụga na mgbatị ahụ
Onye isi ọ bụla ga-akwụ ụgwọ ọtụtụ maka njikwa ego adịghị mma n'ime odida. Agbanyeghị, ndị isi nwere ike ịgbanahụ ụgwọ a ọtụtụ site na ịkọwa onwe ha. Nke a sitere na edemede 2: 138 sub 3 Dutch Civil Code na edemede 2: 248 sub 3 Dutch Civil Code. Onye ndu aghaghi igosi na imezighi ezi ihe aga emechu ya. O nwekwara ike ghara ileghara itinye aka iji gbochie nsonaazụ mmezu nke ọrụ adịghị mma. Ibu ihe akaebe nke ihe ngosiputa diri onye nduzi. Nke a sitere n'okwu ndị a edepụtara wee guzosie ike na iwu ikpe nke Supremelọikpe Kasị Elu Dutch. 
Ibu ọrụ nke mpụga dabere na mmekpa ahụ
Enwere ike ijide ndị ntụ ntụ dabere na omume ịta ahụhụ, nke sitere na ederede 6: 162 Dutch Civil Code. Ihe edemede a na - enye ihe ndabere n'ogo maka ibu. Onye ji ya ụgwọ nwere ike kagbuo ikike nke ndị nduzi dabere na mmekpa ahụ.
Supremelọ ikpe Kasị Elu Dutch nyere ọdịiche abụọ nke ndị nduzi na-akwụ ụgwọ dabere na mmekpa ahụ. Nke mbu, enwere ike ịnabata ibu na ndabere nke ọkọlọtọ Beklamel. N'okwu a, onye isi abanyela na ndị ọzọ na ụlọ ọrụ na nkwekọrịta, ebe ọ matara ma ọ bụ nwee ezi uche kwesịrị ịghọta na ụlọ ọrụ ahụ enweghị ike irube isi na nkwekọrịta a.  Seconddị nke abụọ ụgwọ bụ nkụpu nke akụrụngwa. N'okwu a, onye isi ihe kpatara eziokwu ahụ bụ na ụlọ ọrụ ahụ anaghị akwụ ndị na-akwụ ya ụgwọ ụgwọ ya, na ha enweghị ike imezu ụgwọ ọrụ ya. Ihe onye nduzi ahụ mere bụ akpachapụghị anya, na enwere ike ibo ebubo siri ike megide ya.  Ebubo nke ihe akaebe nke a dị n'aka onye ji ya ụgwọ.
Ikike nke onye isi ochichi iwu
Na Netherlands, mmadụ dị ka eke nwere onwe ya na ụlọ ọrụ nwere ike bụrụ onye ntụzi nke ụlọ ọrụ iwu kwadoro. Iji mee ka ihe dị mfe, a ga-akpọ onye na-ahụ maka ihe na-ahụ maka ya bụ onye ndu ebumpụta ụwa, ụlọ ọrụ iwu kwadoro onye bụ onye nduzi a ga-akpọ onye isi ọrụ na paragraf a. Eziokwu ahụ bụ na ụlọ ọrụ iwu nwere ike ịbụ onye nduzi, apụtaghị na ụgwọ ọrụ ndị isi nwere ike ịkwụsị ya site na ịhọpụta ụlọ ọrụ iwu dịka onye isi. Nke a sitere na edemede 2:11 Dutch Civil Code. Mgbe ejidere onye isi ụlọ ọrụ dị n'aka, ụgwọ a ga-adị n'aka ndị isi okike nke onye isi ihe a.
Nkeji edemede 2:11 Usoro iwu obodo Dutch na-emetụta ọnọdụ ebe enwere echiche nke ndị nduzi site na edemede 2: 9 Dutch Civil Code, edemede 2: 138 Dutch Civil Code na edemede 2: 248 Dutch Civil Code. Agbanyeghị, ajuju bilitere ma ọ bụrụ na edemede nke 2:11 Dutch Civil Code na-emetụta ibu ọrụ ndị nduzi dabere na mmekpa ahụ. Courtlọ ikpe Kasị Elu Dutch kpebiri na nke a bụ eziokwu. N'ikpe a, Courtlọikpe Kasị Elu Dutch na-arụtụ aka na akụkọ iwu. Nkeji edemede 2:11 Usoro iwu obodo Dutch na-ezube igbochi ndị sitere n'okike ịzobe ndị isi ụlọ ọrụ iji zere ibu ọrụ. Nke a gụnyere na ederede 2:11 Dutch Civil Code metụtara okwu niile enwere ike ijide onye isi ụlọ ọrụ dị ka iwu siri dị. 
Mwepu nke ndị isi oche
Enwere ike igbochi ibu ọrụ nke ndị nduzi site na ịhapụ nzipu na ngalaba ndị isi. Charchụpụ pụtara na iwu nke ndị isi ụlọ ọrụ, dịka a na-eduzi ruo oge nzipu, nke ụlọ ọrụ iwu kwadoro. Thereforechụpụ bu ya bụ ihe ngarị nke ndị nduzi. Dischụpụ abụghị okwu a ga-ahụta na iwu, mana a na-etinyekarị ya na ihe ndị mejupụtara ụlọ ọrụ iwu kwadoro. Dischụpụ bụ ihe ana-elepụ anya n'ibu. Yabụ, ntopute na-emetụta ụgwọ dị n'ime. Ndị otu atọ ka nwere ike ịkpọ oku maka ndị isi.
Igbapụta a metụtara naanị eziokwu na ọnọdụ ndị ndị nwe obodo maara n'oge enyere ikike ahụ.  Ibu maka ihe omuma amaghi ga-adi. Yabụ, ihapu abụghị otu narị pasenti dị mma ma ọ naghị enye ndị ndu maka nkwa.
Ndumodu ahia nwere ike buru ihe isi ike ma di uto, ma obu ihe n’eweta ya biara na nsogbu. Ọtụtụ ndị ọchụnta ego kwenyere na ha nwere ike wezuga ibu ọrụ site na ịchọpụta ụlọ ọrụ iwu. Ndi oru itumgbere ahia a gha abia n'ihi mmechuihu; N'ọnọdụ ụfọdụ, ụgwọ nke ndị nduzi nwere ike itinye akwụkwọ. Nke a nwere ike ibute nsonaazụ; Onye na-eduzi ụlọ ọrụ ga-eji ụgwọ nke onwe ya ji ụgwọ ụlọ ọrụ. Yabụ, nsogbu dị n ’ibu ọrụ n’aka ndị isi nduzi ekwesịghị icheta. Ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya maka ndị na-ahazi ụlọ ọrụ iwu irube isi n'iwu niile yana iji aka ha mepee iwu.
Edemede ederede a zuru ezu site na njikọ a
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ kwuo mgbe ị gụchara edemede a, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ Maxim Hodak, ọka iwu na Law & More site na maxim.hodak@lawandmore.nl, ma obu Tom Meevis, onye ọka iwu na Law & More site na tom.meevis@lawandmore.nl, ma ọ bụ kpọọ +31 (0) 40-3690680.
 ECLI: NL: HR: 2006: AZ0758 (Ontariovanger / Roelofsen).
Previous Post Aha UBO na Netherlands na 2020
Next Post Mkpisi aka mebiri emebi GDPR